‘मिस्टर बीन’को मृत्युको झुटो चर्चा ! « Lokpath
‘मिस्टर बीन’को मृत्युको झुटो चर्चा !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा कुन बेला के कुरा चर्चामा रहन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । मानिसहरू सेलिब्रेटीहरूको चर्चा गरिरहेका हुन्छन् । चर्चाका साथसाथै कहिलेकाहीँ स्टारहरुको बारेमा झुटाे समाचारहरु पनि फैलिने गरेको छ ।
कहिले कसैको झुटो अफेयरको खबर आउन थाल्छ, कहिले कसैको मृत्युको चर्चा चलिरहन्छ । पछिल्लो चर्चा भने हलिउड स्टार रोवन एटकिन्सन अर्थात् ‘मिस्टर बीन’सँग सम्बन्धित छ ।
अहिले मिस्टर बीनको मृत्युको खबर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ । ५८ वर्षीय अभिनेता रोवन एटकिन्सनको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको ट्वीटरमा गरिएको ट्विटमा लेखेको छ ।
अर्को ट्वीटमा लेखिएको छ कि ५८ वर्षीय कमेडियन सह अभिनेता रोवन एटकिन्सनको १८ मार्च २०१७ मा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो ।
तपाईँलाई बताउन दिनुहोस् कि मिस्टर बीनको मृत्युको बारेमा यस्तै समाचार २०१८ मा सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो। त्यतिबेला पनि उनको मृत्युको झुटो खबरलाई जनताले सत्य मानेका थिए । यसअघि २०१६ मा पनि केही व्यक्तिहरूले मिस्टर बीनले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै यस्तै समाचार फैलाएका थिए ।
यसपटक फैलिएको समाचार पनि निराधार र गलत हो । कार दुर्घटनाको यो खबर तथ्यका आधारमा पनि गलत छ, किनकि सन् २०१७ मा मिस्टर बीनको उमेर ५८ नभई ६२ वर्ष थियो । सोही वर्ष रोवन तेस्रो सन्तानको पिता पनि बनेका थिए ।
केही मानिसहरूले मिस्टर बीनको मृत्युको यी अफवाहहरूलाई सत्यको रूपमा स्वीकार गरे तर केही प्रयोगकर्ताहरूले बुझे कि यो सबै झुटो थियो। एकजनाले फेसबुकमा ‘प्रत्येक वर्ष मिस्टर बीनको मृत्यु’ पनि लेखेका छन् । त्यही क्रममा अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यो मिस्टर बीन हरेक वर्ष किन मर्छ ?’
प्रकाशित मिति: २०७८,मङ्सिर,८,बुधबार १५:३५